Video: Whitehat SEO loogu talagalay Bloggers | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 7, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan ka dhacay guud ahaan fiidiyowgaan nasiib ahaan, laakiin waxaa habboon in la daawado. Waxaa jira waxyaabo aad u gaar ah oo aad sameyn kartid si aad ugu hagaajiso bartaada mashiinnada raadinta. Waa wax dad badani aan waqti ku qaadan, laakiin waa inay ahaadaan!
Fiidiyowgu wuxuu ka socdaa shirkii WordPress, WordCamp 2007, ayaa la qabtay bishii Luulyo (taas oo aan ka xumahay in aan tebay).
Tags: natiijooyinka ganacsigaganacsiFiidiyowyada SuuqgeyntaCabir CPmyreponosuuq-geynta internetkapr qaybintamaal qabeen raasamaal